About Us - Ningbo Second Uwandu hwemakemikari Co., Ltd
Ningbo Second Uwandu hwemakemikari Factory kwairatidzwa 1988. We ndakazvipiwa mhuka maberekero indasitiri kwemakore 30, uye isu nokubatanidza mbishi zvinhu, kutsvakurudza uye kukura, gadzira, ongororo, kutengeserana, mutengi kutsigira pamwechete kuva pamwero vachida. boka redu rakanga paakavapa se "Zhejiang High hwemberi mukugadzira indasitiri" uye Cixi Top 20 emakambani ".
boka redu ane misoro pakarongwa dzokubereka zvigadzirwa, uye zvinhu zvedu tiri mutengo-inobudirira. Tinoratidzawo ane dzedu huru zvigadzirwa 'API vakanyorwa. Isu ane chikuru chena kamuri mhuka mupurovhinzi kuziva zvinhu zvedu kushanda mune mbeva makonzo. Naizvozvo, kubudirira uye kutsiga zvigadzirwa ndeyechokwadi. Our dzokubereka kemikari zvinotora pamusoro 50% musika mugove yose munyika ranji uye varimi pamusika. Tiri chikuru nokutengesa Mengniu, Yili, Modern Kurima, Beijing guta zvokurimwa, COFCO, Zhongding Dairy Farming, Wens, Chuying Agro-anofudza, Chia Tai boka, Tariro Dairy nezvimwe emakambani makuru.
boka redu ane vepamusoro rwokugadzira uye R & D simba. Professional chiremba vaitungamirira elites 30 zvokurapa chikoro sezvo yedu R & D chikwata, vakabudirira yakatanga vanopfuura 100 zvigadzirwa, uye vamwe zvigadzirwa vakaiswa muruoko dzaFord. Our Chorionic Gonadotropin (HCG) 's mbishi zvinhu potency (10000iu / MG) ndiyo zvizhinji kupfuura zvinodiwa European uye American Pharmacopoeia (4500iu / MG), uye tine mukurumbira munyika dzakawanda. Tinosungirwa pokumuka zvigadzirwa zvitsva: D yavaibvisa chloride uye Butylamine vatatu doro prostaglandin F2 Alpha muri dzedu zvinodhaka itsva vakanyoresa wemhuka, uye vari pamusika. (Tiri chete fekitari anenge vakanyorwa D chloride saka kure.) Kambani yedu vakanyorwa Menotropins kuti jekiseni (mamwe zita: Chaopai å).
Zvinogadzirwa kambani Vedu vari zvinowanzoshandiswa hove, nguruve, dhayari mombe, makwai, mhuka dzinovaraidza, etc. Nokuti hove, tine mukomboni Salmon GnRHa kuti jekiseni kuti madhaka hove. Nokuti penguruve, isu Pari vakanyorwa tongfasu (aimbova zita PC600), uye ane chete tupukanana maturo sezvo Intervets 'PG600. Our itsva Kunyoresa chigadzirwa Altrenogest nomumukanwa mvura yapfuura ushumiri hwokurima review, uye achapedzisa kunyoresa nokukurumidza. Achiedza Altrenogest wedu ranji guru, kana kusimudzira swines 'batch mangé zvakanaka, izvozvo inowana zvinoshamisa chaizvoizvo; panguva imwe chete, uchishandisa PMSG uye GnRH pamwe chete swines 'wakaiswa nguva insemination, kuvandudza swines' maberekero okufunga. Nokuti dhayari mombe, shandisa GnRH uye D chloride pamwe dhayari kuti ngadzirambe nguva insemination, rinobatsira kuti corpus luteum mbeu, uye kuwedzera dhayari mombe pamuviri unodiwa.
Mumakore 30 apfuura, tinoramba vatevere michina yemhando yepamusoro kuti ape zvinhu uye mabasa nani vatengi vedu. Basa redu tinovavarira kuva kutungamirira nemakambani kambani ine hwakanakisisa mumunda yedu. Chiratidzo wedu tichatsvaka zvemberi michina zvenyika uye elites nyanzvi pakusika chemhando yepamusoro uye zvakanakisisa mabasa, uyewo vawane mukurumbira uye musika mugove pamwe kutendeseka uye kuvimbika zvakanaka uyewo akatsiga unhu.